MediaTek Helio P60 SoC တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ OPPO F7 | F7 Youth – DigitalTimes.com.mm
Helio P60 က MWC 2018 မှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ SoC ဖြစ်သလို MediaTek ရဲ့ အကောင်းဆုံး SoC လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Helio P60 ဟာ NeuroPilot လို့ ခေါ်တဲ့ AI Processing Unit (APU) ပါဝင်တဲ့ SoC အမျိူးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
OPPO F7 | F7 Youth တို့ဟာ MediaTek ရဲ့ Helio P60 SoC ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Artificial Intelligence (A.I) လုပ်ဆောင်ချက် များစွာ ပါဝင် ပါတယ်။ F7 | F7 Youth တို့မှာ ပါဝင်တဲ့ Beauty Technology 2.0, A.I. Scene Recognition, A.I. Album Smart Photo နဲ့ A.I. Battery Management တို့ဟာ Helio P60 က ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ အရာများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် OPPO F7 ရဲ့ Selfie Camera အတွက် 25MP Sony IMX576 Sensor ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် Selfie ဓာတ်ပုံများဟာ ပိုမို ကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Helio P60 က Artificial Intellignece Processing Units (APUs) ပါဝင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး 12nm Multi-core A.I. Powered Processor ဖြစ်ပြီး Performance အပိုင်းမှာ ယခင်မျိူးဆက်ထက် 70% ထိ ပိုမို မြန်ဆန်လာတယ်လို့ MediaTek က ပြောကြားထားပါတယ်။ Helio P60 ဟာ Flagship Features တွေဖြစ်တဲ့ AI လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Gaming Experiences နဲ့ Smart Camera လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်တဲ့ Processor အမျိူးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
Helio P60 ကို အသုံးပြုထားတဲ့ OPPO F7 က AnTuTu Benchmark မှာ ရမှတ် ၁၃၇,၉၉၉ ရရှိပြီး SD660 ကို အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းကတော့ ရမှတ် ၁၃၃,၇၀၈ ရရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Geekbench4မှာ Single Core အနေနဲ့ ရမှတ် ၁၅၂၄ ရရှိပြီး Multi Core အနေနဲ့ကတော့ ရမှတ် ၅၈၇၁ ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ SD 660 ကို အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းကတော့ Single Core ၁၆၁၀ မှတ်နဲ့ Multi Core ၅၈၀၃ မှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် MediaTek ရဲ့ Helio P60 ဟာ Snapdragon 660 SoC နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းလို့ ပြောလို့ ရမယ် ထင်ပါတယ်။
MediaTek Helio P60 SoC တှကေို အသုံးပွုထားတဲ့ OPPO F7 | F7 Youth
Helio P60 က MWC 2018 မှာ စတငျ မိတျဆကျခဲ့တဲ့ SoC ဖွဈသလို MediaTek ရဲ့ အကောငျးဆုံး SoC လို့ ပွောမယျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ Helio P60 ဟာ NeuroPilot လို့ ချေါတဲ့ AI Processing Unit (APU) ပါဝငျတဲ့ SoC အမြိူးအစား ဖွဈပါတယျ။
OPPO F7 | F7 Youth တို့ဟာ MediaTek ရဲ့ Helio P60 SoC ကို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ Artificial Intelligence (A.I) လုပျဆောငျခကျြ မြားစှာ ပါဝငျ ပါတယျ။ F7 | F7 Youth တို့မှာ ပါဝငျတဲ့ Beauty Technology 2.0, A.I. Scene Recognition, A.I. Album Smart Photo နဲ့ A.I. Battery Management တို့ဟာ Helio P60 က ထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ အရာမြား ဖွဈကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ OPPO F7 ရဲ့ Selfie Camera အတှကျ 25MP Sony IMX576 Sensor ကို အသုံးပွုထားတာကွောငျ့ Selfie ဓာတျပုံမြားဟာ ပိုမို ကောငျးမှနျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
Helio P60 က Artificial Intellignece Processing Units (APUs) ပါဝငျတဲ့ ကမ်ဘာ့ ပထမဆုံး 12nm Multi-core A.I. Powered Processor ဖွဈပွီး Performance အပိုငျးမှာ ယခငျမြိူးဆကျထကျ 70% ထိ ပိုမို မွနျဆနျလာတယျလို့ MediaTek က ပွောကွားထားပါတယျ။ Helio P60 ဟာ Flagship Features တှဖွေဈတဲ့ AI လုပျဆောငျခကျြ၊ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ Gaming Experiences နဲ့ Smart Camera လုပျဆောငျခကျြတှေ ပါဝငျတဲ့ Processor အမြိူးအစား ဖွဈပါတယျ။
Helio P60 ကို အသုံးပွုထားတဲ့ OPPO F7 က AnTuTu Benchmark မှာ ရမှတျ ၁၃၇,၉၉၉ ရရှိပွီး SD660 ကို အသုံးပွုထားတဲ့ စမတျဖုနျးကတော့ ရမှတျ ၁၃၃,၇၀၈ ရရှိတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Geekbench4မှာ Single Core အနနေဲ့ ရမှတျ ၁၅၂၄ ရရှိပွီး Multi Core အနနေဲ့ကတော့ ရမှတျ ၅၈၇၁ ရရှိတာ ဖွဈပါတယျ။ SD 660 ကို အသုံးပွုထားတဲ့ စမတျဖုနျးကတော့ Single Core ၁၆၁၀ မှတျနဲ့ Multi Core ၅၈၀၃ မှတျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ MediaTek ရဲ့ Helio P60 ဟာ Snapdragon 660 SoC နဲ့ မတိမျးမယိမျးလို့ ပွောလို့ ရမယျ ထငျပါတယျ။
Helio P60MediaTekOppo F7